Fetsy mba hampamirapiratra ny volon'ny soavaly | Soavaly Noti
Monica sanchez | | tranon
Ilay soavaly dia mety ho iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny fanjakan'ny biby izay mamindra ny hatsarana sy ny kanto indrindra. Ny fitondra-kanto nananany dia nahatonga ny olombelona ho raiki-pitia hatrizay hatrizay. Misy karazan-karazany maro samy hafa, izay ny morphologie mety ho samy hafa kely amin'ny iray hafa, izay milaza fa ny mpiompy na ny mpitaingina zana-kazo dia voafitaky ny karazany manokana, izay be voninahitra kokoa. Ny ifanarahan'ireo rehetra tafiditra amin'ny tontolon'ny soavaly dia ny ampahany lehibe amin'ny tsiambaratelon'ny maha-andriamanitra io biby io no mipetraka amin'ny volony: ny mane sy ny rambony.
Ny mana sy rambo mamirapiratra dia mariky ny fahasalamana, noho izany, iray amin'ireo ahiana lehibe indrindra dia ny: Ahoana ny fomba hanomezana azy ireo toetra mampamirapiratra?
1 Inona no atao hoe voran'ny soavaly?
2 Fanosotra isan'andro
4 Fitsaboana ao an-trano hampamirapiratra ny volon'ny soavaly
4.1 Fangaro menaka
4.2 Apple cider cuka
4.3 Fanomanana menaka mineraly
5 Ahoana ny fambolena vilom-soavaly
6 Aiza no hividianana soavaly soavaly
Inona no atao hoe voran'ny soavaly?
Antona iray lehibe no antony ananan'ny biby ity: hampitahorana ny bibikely ohatrinona izy ireo no afaka manelingelina anao. Noho izany, raha hitanao fa mampihetsi-po ny lohan'ny loha sy ny hatoka mihetsika tampoka ny Equine dia azo antoka fa mila mametraka antiparasite 🙂 ianao.
Antony iray hafa mety hitranga ny fananana fiarovana kely kokoa mandritra ny ady, satria ireo biby mpihaza azy ireo (felines, canines) matetika dia manafika ny hatoka aloha. Arakaraka ny maha-be ny palitaon'ny mana no vao mainka hanavotana ny tenany ny mpitaingin-tsoavaly.
Ny biby fiompy manaja tena dia mila fikojakojana sy fikolokoloana isan'andro, ary ny soavaly tsy ho ambany. Ao anatin'ireto fikolokoloana resahina ireto dia ny fanosotra. Na ny mane na ny rambony ary, noho izany, ny volom-biby amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy kosehina isan'andro, indrindra raha mandany ora maro any ivelany ny soavalintsika. Amin'izany no hanafoanana ireo zavatra mandoto ny volo, toy ny vovoka, fotaka ary katsentsitra, ary havelanay miaina tsara ny hoditrao eo am-pamoahana ny menaka sy ny savony izay manampy hamirapiratra.
Manoro hevitra ihany koa ny manam-pahaizana maro fandroana matetika izay ahafahana mampiditra shampoos manokana amin'ny fikolokoloana ny volon'ireto biby ireto, na, aorian'ny fikosehana dia esory amin'ny silipo silipo ilay biby izay manome hery sy tsy fitovizan'ny volo.
Ny biby rehetra dia mamokatra savoka sy tavy izay manampy azy ireo hitandrina ny hodiny, ny akorany, sns. Ireo tavy ireo dia ampahany amin'ny firafitry ny hoditra, manome azy ireo henjana, elastika, sns, raha ny menaka no tena meloka amin'ny famirapiratana. Ny tavy sy ny diloilo, samy akora lipida, dia tafiditra ao anatin'ny karazana macronutrients samihafa izay mihinana amin'ny sakafo. Noho izany, raha manankarena ny sakafon-tsoavaly amin'ireo isika, dia hahatratra ilay famirapiratana tadiavina indrindra.
Ny fahana kompana hitantsika eny an-tsena dia efa tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny soavaly ny tavy sy menaka ilaina, fa raha te hanatsara azy isika dia afaka manampy iray sotro ny menaka legioma ho an'ny sakafom-bary na sakafo hohanina omena. Fepetra iray hafa ny fampiharana ny famenon'ny calcium sy phosforus, raha mbola amin'ny fomba voalanjalanja sy amin'ny fatra natolotry ny manam-pahaizana, raha tsy izany dia hahazo ny vokatra mifanohitra amin'izany isika satria hampiroborobo ny fisehoan'ny fanovana eo amin'ny zavamananaina ao amin'ilay biby.
Fitsaboana ao an-trano hampamirapiratra ny volon'ny soavaly
Amin'ity lafiny ity, toy ny ankamaroan'izy ireo dia "samy manana ny bokikely misy azy ny mpampianatra tsirairay." Afaka mahita tetika tsy manam-petra ampiasain'ny olona hitazomana sy hamirapiratra ny fehin'ny soavaly sy ny rambony isika. Maro amin'izy ireo no vita an-trano sy vita tanana.
Iray amin'ireo malaza sy ampiasaina indrindra, indrindra ireo izay manomana ny soavaliny amin'ny fifaninanana hazakazaka na fampirantiana, dia miorina amin'ny a sarotra voaomana amin'ny menaka.
Ity fanomanana ity dia misy: Menaka oliva 10 sotro fihinanana, iray sotro sy voninkazo solifara ary antsasaky ny sotrokely atody. Samy mifangaro, ary apetaka amin'ny vodin-tsoavaly amin'ny fikosehana moramora rehefa voasasa ny volo. Mazava ho azy fa tsy maintsy tazominao amin'ny toerana alokaloka ny soavaly ary aza ialana amin'ny taratry ny masoandro raha toa ka maina tanteraka io concoction io, mba hialana amin'ny fiovan'ny lokony na ny fiovan'ny tonon'ireo faritra voatsabo.
Ny iray amin'ireo fanafody malaza indrindra izay tsy vitan'ny hoe volo soavaly, fa ampiasaina amin'ny karazan-biby rehetra misy volo ary na amin'ny olombelona aza dia ny fifangaroan'ny vinaingitra sy rano paoma.
Vinaingitra, noho ny asidra avo lenta, manana pH avo izay mifanohitra amin'ny PH ambany tavy. Raha manana hodiny matavy sy be menaka ny soavalintsika, fa tsy manjelanjelatra, dia ho hita eo amin'ny endrika bika sy maloto izany. Ny famafazana vinaingitra paoma tsy be loatra amin'ny rano no vahaolana mahomby indrindra hiadiana amin'ity olana ity.
Aza manahy momba ny fofona mahery miaraka amin'ny vinaingitra, satria ritra ny volo, hanjavona tanteraka io fofona io.
Fanomanana menaka mineraly
Angamba, io menaka manitra io dia iray amin'ireo sarotra atao indrindra noho ny karazan-tsakafo entiny. Na izany aza, mpiompy maro no milaza fa mandeha izy io, ary mitazona ny bibikely sy ny katsentsitra toy ny moka ihany koa.
Mila izany menaka mineraly iray litatra, fantatra amin'ny faritra sasany toy ny jelly petrole ranon-javatra, menaka citronella 8 sotro fihinana, ary sotro terebene balsama 10 tablespoons. Soso-kevitra ny hametahana azy io amin'ny mana sy ny rambony ihany fa tsy amin'ny faritra hafa amin'ny vatan'ny soavaly.
Ireo torohevitra rehetra ireo dia hanampy ny palitaon'ny soavalintsika ho salama sy matanjaka ary mamiratra, saingy tsy izy ireo ihany. Eny an-tsena dia misy vokatra marobe izay mety tena ilaina: sprays, palitao, menaka, sns. Afaka mandeha any amin'ny fivarotana na orinasa matihanina izahay mba hahazoana torohevitra, ary, mazava ho azy, any amin'ny mpitsabo biby.
Na dia, raha te hisoroka ny fampiharana ireo vokatra aza isika, manao ny fanonintsika manokana sy ny sisa, dia tsy maintsy fantatsika izany una ny sakafo mahavelona ampy dia mety hanamaivana ny tsy fahampiana maromaro izay hitantsika amin'ny soavalintsika, anisan'izany ireo hatsaran-tarehy. Na izany aza, amin'ity fanontaniana farany ity dia mila fiheverana manokana ny fahadiovana. Ny fahazarana toy ny fanosotra na fanasana isan'andro dia tena manohana.
Tsara homarihina fa amin'ny fotoana maro dia hitantsika fa tsy tsara ny fambolena sy ny rambony, zavatra iray izay hita ihany koa amin'ny sisa amin'ny vatana. Amin'izay fotoana izay no tsy maintsy hijerentsika lavitra, ary handinihantsika ny mety hiatrehantsika karazana fifaliana na aretina, indrindra raha tsapantsika fa mikotrika matetika ilay biby na mampiseho soritr'aretina ambonimbony (ratra, fahasosorana, ...). Raha izany no izy, alohan'ny hiahiahy momba ny fiaramanidina hatsarana, tsy maintsy ataontsika ho an'ny mahasalama izany, ary mankany amin'ny mpitsabo biby alohan'ny handraisantsika hetsika.
Ahoana ny fambolena vilom-soavaly
Ny vodin-tsoavaly dia iray amin'ny faritra tsara indrindra amin'ny biby, fa inona no hataonao hampitomboana azy? Misy safidy roa:
Karakarao ny faran'ny volo: toy izao no entanentanana ny folon'ny volo, hahitana fitomboana tsara kokoa.
Miaraka amin'ny biotin: vitamina (H) izay amin'ny soavaly no ampiasaina tsara ho an'ny palitao amin'ny endrika shampoo na vovoka. Ho hitanao ihany koa ny sakafo misy an'io vitamina io.
Aiza no hividianana soavaly soavaly
Afaka mividy soavaly soavaly ianao any amin'ny magazay vokatra ho an'ireo biby ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » tranon » Fetsy mba hampamirapiratra ny volon'ny soavaly